Faallo:- Xisaabta Siyaasadeed ee doorashada Puntland ee sanadka 2019 iyo wejiga dhabta ah ee Prof. Gaas – Madal Furan
Hoy > Fikradaha > Faallo:- Xisaabta Siyaasadeed ee doorashada Puntland ee sanadka 2019 iyo wejiga dhabta ah ee Prof. Gaas
Faallo:- Xisaabta Siyaasadeed ee doorashada Puntland ee sanadka 2019 iyo wejiga dhabta ah ee Prof. Gaas
Editor September 27, 2018 September 27, 2018 0
Madal Furan – Inta la hubo mudo Saddex bilood oo keliya ayaa waxay ka harsan tahay xiliga doorashada Puntland ee sanadka 2019, waxaana soo muuqanaya Musharixiinta doonaysa inay u tartamaan xilka Madaxweynaha Puntland oo la saadaalinayo inay noqodaan kuwii ugu tirade badanaa mudadii Maamulka Puntland uu jiray.
Doorashada ku soo wajahan Puntland ayaa dadka badankiis u arkaan inay noqon doonto midii ugu adkeyd uguna xiisaha badneyd ee ka dhici doonta magaaladda Garoowe ee Caasimadda Puntland 8da Janaayo 2019-ka.
Qaab caynkee ah ayaa doorashadan loo wajahi doonaa?
Maamulka C/weli Maxamed Cali Gaas ayaa ku guul darreystay inuu hirgeliyo doorasho qof iyo cod ah oo loogu tartamo nidaam Xisbiyeed, waxaana la filayaa in Madaxweyne Gaas uu ka mid noqon doono Musharixiinta u loolamaya xilka Madaxweynaha Puntland sanadka soo socda.
Maamulkii Madaxweyne c/raxmaan Maxamed Faroole ayaa lagu xasuustaa inuu ahaa kan keliya ee isku dayey inuu hirgeliyo nidaamka Xisbiyada badan ee dadweynuhu codkooda si xor ah wax ugu doortaan, balse waxaa lagu dhaliilay in Saddexdii Xisbi ee tartamayey ay ka yimaadeen Xukuumadii Madaxweyne Faroole, taasina ay sababtay in dadweynuhu si adag ugaga horyimaadaan.
Go’aankii geesinimada lahaa ee Mr. Faroole ayaa wuxuu horseeday in dib loogu noqdo nidaamkii qabaliga ee horay wax loogu soo dooran jiray.
Yaa Xulaya Guddiga Khilaafaadka Xildhibaanada Puntland?
Laba arrimood ayaa sahashay in Musharixiintii u loolameysay xilka Madaxweynaha ee Puntland ay dib uga laabtaan inay mugdi geliyaan kalsoonida Guddiga uu Faroole magacaabay, maadaama ay Laba sifood ku yimaadeen, tan hore, Iyadoo xubnaha Guddiga ay ahaayeen kuwa lagu kalsoonaan karo oo ka koobnaa shakhsiyaad bulshadda magac ku leh iyo iyadoo ay kala go’day silsiladii isku xireysay nidaamka Dimoqraadiga iyo Maamulka Puntland.
Dadstuurka Puntland ee xiligii Madaxweyne Faroole ay ansiyeen Ergo laga soo xulay Goboladda Puntland ayaa ku saleysan nidaamka Dimoqraadiga ee Xisbiyadda badan.
Waxaa dad badani is weydiinayaan xiligan wadada loo mari doono soo xulista Guddiga khilaafaadka ee Xubnaha Xildhibaanada Puntland, gaar ahaan haddii Madaxweynaha Puntland uu ka mid noqdo musharixiinta u tartamaya xukunka Puntland?
Wararka laga helayo Musharixiinta tirade badan ee 2019-ka doonaya inay u loolamaan hogaanka Puntland ayaa sheegaya inay ka horimaan doonaan Guddi uu keligiis magacaabo Madaxeyne Gaas, iyagoo sabab uga dhigaya inuu ku guul darreystay hirgelinta Dastuurkii uu dalka ku soo dhaqayey ee ku saleysnaa doorasho xor ahi in geyiga ay ka dhacdo sanadka 2019-ka.
Baarlamaanka Puntland ayaa dhowaan isku dayey inay meel mariyaan hindise lifaaq ah oo lagu qeexi lahaa wadada loo marayo soo xulista Guddiga Khilaafaadka, balse, Dr. Gaas ayaa olole balaaran u galay in mooshinkaasi uusan mira dhalin, kaasoo la rumeysan yahay inuu ku guuleyestay.
Musharixiinta u tartamaya xilka Madaxweynaha ayaa waxay ku taamayaan in la helo Guddi ay soo xulistiisa kaalin muuqata ku yeeshaan Musharixiintu, balse aysan marti u noqon doonin mid uu Dr. Gaas keligiis qalin soo magacaabo isagoo musharax la siman ah.
Ma laga yaabaa in Madaxweyne Gaas uu jilaafooyin u dhigo doorashada Puntland ee sanadka 20119ka?
Inbadan ayuu Dr. Gaas sheeg sheegay in doorashada Puntland ay dhici doonto xiligii loogu tala galay, balse waxaa jira warar ka soo finfiniinayey Madaxtooyada Puntland 24kii saac ee la soo dhaafay oo sheegaya in Madaxweyne Gaas uu qorsheynayo sidii u qaadi lahaa dagaal ka dhex qarxa Ciidamada Puntland iyo Somaliland, markaas kadibna uu laalo sharciga, waddankana geliyo xaalad deg deg ah oo Madaxweynaha uu awood u yeelanyo bixinta awaamiirta.
Saraakiisha Sar Saree e Ciidamadda ayaa la sheegayaa inay ka soo horjeedaan xiligan in dagaal la qaado, maadaama ay dhamaatay fursadihii uu Dr.Gaas horay u soo lumiyey mudadii 8 bilood aheyd ee Tuulada Tukaraq ay haysteen ciidamadda Somaliland.
Waxaa kaloo jira warar ay Madal Furan ka heshay ilo lagu kalsoonaan karo oo sheegaya in Madaxweynaha Puntland uu qorsheynayo inuu xilka ka qaado Saraakiil Sare oo uu ka mid yahay Gen. Siciid Dheere oo ah Taliyaha ciidamadda Daraawiishta Puntland tan iyo markii Puntland la aasaasay.
Warku wuxuu intaas ku darayaa in sidoo kale uu Dr. Gaas doonayo inuu isbedel xoog leh ku sameyn doono maamulada Goboladda qaarkood sida Gobolka Nugaal oo isbedelkaasi ka bilowday iyo Gobolka Bari oo uu doonayo inuu kan Labaad ka dhigo, dekedda Boosaaso oo muhiim u ah dhaqaalaha Puntland ayaa la hadal hayaa inuu Dr. Gaas doonayo inuu u magacaabi doono Taliye uu ku kalsoon yahay oo ka soo jeeda Jifida Madaxweyne Gaas.
Arrintu siday doonto ha ahaatee, waxaa dadka siyaasadaha odorasa ay sheegeen in Madaxweynaha Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas mudadii 5ta sanadood aheyd ee uu xilka soo hayey uu lumiyey fursado badan, maamulkiisana lagu tilmaamay kii ugu liitay ee Puntland soo maray.
Dharbaaxadii siyaasadeed ee ugu danbeysay ee ku dhacday Prof. Gaas ayaa aheyd tii uu kala kulmay mashruucii dowladda Jarmalku ugu deeqday jidka isku xira Garoowe iyo Gaalkacyo oo meelo ka mid ah oo burburay dib-u-dhis loogu sameyn lahaa oo la musuqmaasuqay.
Haddaba, waxaa aad u adag xisaabta siyaasadeed ee u dhexeysa Madaxweyne Gaas iyo Musharixiinta xil doonka ah ee reer Puntland oo ballan qaadaya inay wax badan ka sixi doonaan khaladaadkii Dr. Gaas uu dalkaan ka galay.
Muqdisho:- Gaadiid ay AMISOM leeyihiin oo jiiray Askar iyo nin shacab ah.